Asomafo Nnwuma 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 12:1-25
12 Ɛbɛyɛ saa bere no ara mu na Ɔhene Herode tuu n’ani sii nnipa a wɔwɔ asafo no mu binom so dii wɔn ani.+ 2 Ɔde nkrante kum Yohane+ nua Yakobo.+ 3 Bere a ohui sɛ Yudafo no ani agye ho+ no, ɔtoaa so kɔkyeree Petro nso. (Nea ɛte ne sɛ na ɛyɛ bere a wodi paanoo a mmɔkaw nnim.)+ 4 Na ne nsa kaa no no, ɔde no too afiase,+ dan no maa akuw anan a asraafo baanan wɔ emu biara mu sɛ wɔnwɛn no nnidiso nnidiso, a na wayɛ n’adwene sɛ twam afahyɛ+ no akyi no, ɔde no bɛma nkurɔfo no. 5 Enti na Petro da afiase, na asafo no kɔɔ so bɔɔ Onyankopɔn mpae+ denneennen maa no. 6 Afei bere a Herode de no rebɛma nkurɔfo no, na Petro da asraafo baanu ntam saa anadwo no a wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn abien agu no, na awɛmfo wɔ ɔpon no ano rebɔ afiase no ho ban. 7 Na hwɛ! Yehowa bɔfo begyinaa+ hɔ, na hann bi hyerɛn afiase dan no mu. Ɔbɔɔ Petro nkyɛnmu nyan no+ kae sɛ: “Sɔre ntɛm!” Na ne nkɔnsɔnkɔnsɔn no fii ne nsa guu fam.+ 8 Ɔbɔfo+ no ka kyerɛɛ no sɛ: “Siesie wo ho na hyɛ wo mpaboa.” Ɔyɛɛ saa. Afei ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Fa w’atade nguguso+ hyɛ na di m’akyi.” 9 Na ofii adi dii n’akyi, na na onnim sɛ nea ɔbɔfo no reyɛ no resi ankasa. Nokwarem no, na osusuw sɛ ɛyɛ anisoadehu.+ 10 Wɔfaa awɛmfo agyinae a edi kan ne nea ɛto so abien hɔ koduu dade pon a ɛkɔ kurow no mu no ano, na ɛno ankasa bue maa wɔn.+ Na wopuei no, wokosii ɔtempɔn biako so, na ɛhɔ ara ɔbɔfo no gyaw no hɔ kɔe. 11 Na Petro ani baa ne ho so no, ɔkae sɛ: “Afei na mahu ankasa sɛ Yehowa na ɔsomaa ne bɔfo+ beyii+ me fii Herode nsam ne nea na Yudafo no ani da so nyinaa mu.” 12 Na odwinnwen ho wiei no, ɔkɔɔ Yohane a wɔfrɛ no Marko+ no maame Maria fie, faako a na nnipa dodow bi ahyiam rebɔ mpae no. 13 Bere a ɔbɔɔ abɔnten pon no mu no, abaawa bi a wɔfrɛ no Roda bae, 14 na ɔtee Petro nne no, anigye nti, wammue pon no, na mmom ɔsan kɔɔ mu kɔbɔɔ amanneɛ sɛ Petro gyina aboboano hɔ. 15 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Woabɔ dam.” Nanso osii so dua denneennen sɛ ɛte saa. Afei wɔkae sɛ: “Ɛyɛ ne bɔfo.”+ 16 Ná Petro da so ara gyina hɔ rebom. Bere a wobuei no, wohuu no maa wɔn ho dwiriw wɔn. 17 Na onyamaa+ ne nsa kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnyɛ komm na ɔkaa sɛnea Yehowa yii no fii afiase no ho asɛm nyinaa kyerɛɛ wɔn, na ose: “Monkɔka eyinom ho asɛm nkyerɛ Yakobo+ ne anuanom no.” Ɛnna ofii adi kɔɔ baabi foforo. 18 Na ade kyee+ no, nea aba Petro so no maa asraafo no ani so yɛɛ krakra a na ɛnyɛ asɛm ketewa. 19 Herode+ hwehwɛɛ no denneennen, na bere a onhu no no, obisabisaa awɛmfo no nea esii, na ɔhyɛe sɛ wɔmfa wɔn nkɔtwe wɔn aso;+ na ofii Yudea kɔɔ Kaesarea kodii nna kakra wɔ hɔ. 20 Afei, n’ani beree Tirofo ne Sidonfo so. Enti wɔyɛɛ nokoro baa ne nkyɛn, na bere a wɔmaa Blasto a ɔhwɛ ɔhene dabere so tee wɔn ase no, wofii ase srɛ hwehwɛɛ asomdwoe, efisɛ na ɔhene no man no na ɛma wɔn man no aduan.+ 21 Na da a wɔahyɛ no dui no, Herode de ahentade hyehyɛɛ ne ho, na ɔtenaa atemmu agua so fii ase kasa kyerɛɛ wɔn. 22 Nkurɔfo a wɔahyiam no nso fii ase teɛteɛɛm sɛ: “Onyame bi nne ni, ɛnyɛ onipa nne!”+ 23 Ɛhɔ ara na Yehowa bɔfo bɔɔ no,+ efisɛ wamfa anuonyam no amma Onyankopɔn;+ na ɔdɔree mmoawa wui. 24 Nanso Yehowa asɛm+ nyaa nkɔso na ɛtrɛwee.+ 25 Na Barnaba+ ne Saul de, wɔde asetenade+ kɔsom wɔ Yerusalem wiei koraa no, wɔfaa Yohane+ a wɔfrɛ no Marko no kaa wɔn ho san bae.
Asomafo Nnwuma 12